I-ACE OF CUPS: INTSINGISELO, INKCAZELO, INDIMA NOKUNYE OKUNGAKUMBI
El I-ace yeekomityi zetarotNjengazo zonke ii-aces, luphawu lwesiqalo esitsha; Kodwa, esi siqalo sijolise ngakumbi kwiimvakalelo, inokuba kukufika kothando olutsha okanye, ukuvulwa kweendlela ezintsha zeemvakalelo, kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi.
2 I-Ace yeekomityi ethe nkqo
2.3 Dinero y finzas
3 I-Ace yeekomityi kwindawo eguqulweyo
3.3 Dinero y finzas
4 Ukudityaniswa kwamanye amakhadi
Kweli khadi sinokubona isandla siphethe ikepisi, apho kuphuma khona imilambo emihlanu engapheliyo. Ikomityi kukumelwa kwengqondo encinci, amanzi abhekisa kwiimvakalelo ezintlanu kwaye, ukuhamba okuninzi nokuqhubekayo, kubhekisa kukuhamba kwemvakalelo kunye ne-intuition evela ezinzulwini.
Ngaphezulu kweglasi, ihobe elihlayo liyaboniswa, elimbonakaliso ephilayo yothando lukaThixo oluhamba ngengqondo engenangqondo ukuya ezingqondweni. Isandla esiphethe ikepisi sivela emafini kwaye sibonisa ulwazi ngeempembelelo zokomoya kunye namandla; phantsi kwesandla, sibona ulwandle olukhulu apho iintyatyambo ezininzi ze-lotus zichithakele khona, oku kungumqondiso wokuvuka komoya womntu.
Inkcazo yangaphambili ibhekisa kwikhadi le-tarot; kwindaba ye I-ace yeekomityi kumgangatho wespanish, ubukhulu becala into eboniswayo yikomityi yodwa; kodwa, ikwamele ukufika kwesiqalo esitsha.
Ngenisa eli khonkco lilandelayo, kwaye uqhubeke ufunda malunga ukumkani wegolide kwaye ifihla ukutolikwa okungakholelekiyo.
I-Ace yeekomityi ethe nkqo
I-ace yeekomityi iyafana nezinto ezintle, iqikelela ukufika kweendaba ezimnandi xa kufikwa kuthando, ulonwabo kunye nothando. Kwinqanaba leemvakalelo kunye nokuchaphazeleka, izinto kufuneka zihambe ngokumangalisayo; Lo ngumzuzu ofanelekileyo wokuziva ugcwele ngobomi; ikamva limnandi kwaye linoxolo.
Kwakhona, siyalungisa ukuba i-ace yeekomityi ibhengeza izinto ezintle kwindiza yothando; Inokuba bubudlelane obuqhubayo, mhlawumbi buye bunzulu ngokuqonda ngakumbi, okanye nayiphi na into ebalulekileyo kulwalamano.
Kulabo bodwa, ubudlelwane obutsha bunokwenzeka ngekona; Oku kunokuba nzima kakhulu, kwaye mhlawumbi kuhlawuliswa ngakumbi ngokweemvakalelo nangokweemvakalelo, kunokwabelana ngesondo; Le leta yinto elungileyo kakhulu kwabo balinde uthando.
Kule nkalo, i-ace yeekomityi kukufika kokunyuswa, ukunyuselwa kwaye, ngokuthe ngqo, kunokuthetha ukungena kumsebenzi omtsha; Kwabo bangaphangeliyo, le leta luphawu lwamathuba amatsha kwaye nokuba bangathatha ithutyana, akufuneki sinikezele.
Ngokudityaniswa namakhadi athile, i-ace yeekomityi inokuba luphawu lohambo lweshishini; ukubonakala kwe-horizons ezintsha kunye neendawo.
Ukulandela umgca "wento entsha", i-ace yeekomityi ibonisa ukufika okunokwenzeka kwemali. Ingabonisa umsebenzi omtsha wabantu abangaphangeliyo, umsebenzi owongezelelweyo nomvuzo wabo, ukunyuselwa; Kwaye ungatsho ukuba umntu uza kufumana imali ngokungacwangciswanga okanye ayifumane.
Ngokubanzi, i-ace yeekomityi yikhadi elibonisa impilo entle; kubantu abakunyango okanye abanesigulo esithile, le leta ibonisa ukuphucuka okukhulu; Yimbonakaliso yamandla amatsha, anamandla, abantu basendleleni yokuphucula okanye ukoyisa amanqanaba abalulekileyo.
I-Ace yeekomityi kwindawo eguqulweyo
Njengoko sibonile, xa unobumba esekunene, yonke into ihamba ngokumangalisayo; Kwelinye icala, xa i-ace yeekomityi ibuyisiwe, izinto ziqala ukuma kancinci kancinci. Abantu baziva bebambekile, ikakhulu ngokwasemoyeni; i-blockade yenza kube nzima ukuziva okanye ukuveza iimvakalelo; Ukuze uqhubeke, kufuneka uchonge ukuba zeziphi iibhloko.
Ngokufanayo, eli khadi linokuba sisalathiso sokuba kufuneka sibambe iziqhoboshi; kwezo meko apho indlela yokubonisa iimvakalelo iye yaxokozela, inobundlobongela kwaye iyenzakalisa; kwangokunjalo, inokubonisa kwakhona ukubopha kubantu abaneemvakalelo eziye zonganyelwa ziintlungu kunye noxinzelelo.
Ngothando, le ace yeziselo luphawu lokuba uthathe isimo sokuzikhusela, kunokwenzeka ukuba uyakuphepha ukwenzakala; Kodwa ngamanye amaxesha olu hlobo lokuziphatha luphela lusenza izinto zibe mandundu; ithanda ukuthula kunye nokuqina, oko kunokukhokelela kutoliko olungelulo.
Lixesha lokuba uvule iqabane lakho, uveze iimvakalelo zakho; Kodwa lumka, ukuba akayiqondi okanye akafuni ukuba basebenze kubudlelwane, ke akangomntu ulungileyo.
I-ace eguqulweyo yeekomityi ayithethi ukuba umsebenzi uya ungahambi kakuhle, ukuba kuyinyani ukuba luphawu lokuma; kodwa ngamanye amaxesha akukubi ukuhlala apho ukhoyo. Lisekhadi elibonisa iziqalo ezintsha, kodwa ngoku yonke into imile; Unyuselo olulindelweyo lusenokulibaziseka, uhambo kungafuneka lumiswe, okanye iprojekthi entsha kusenokufuneka iyeke.
Xa eli khadi libuyisiwe, imali ayisiyiyo ingxaki yesininzi, nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kukho ukungangqinelani; ukungoneliseki ngokubhekisele kwimali. Inokubhekisa kwinkcitho engalindelekanga, ukonyuka okuguqulweyo, okanye ishishini ebelisebenza kakuhle kodwa ngoku limile.
Ekuqaleni kweli candelo, bathethile ngeebhloko ezikwimvakalelo, kwaye kwicandelo lezempilo, ileta ibonisa ukuba ezi bhloko kufuneka ziphononongwe. Yonke into esiyivayo kwaye singayichazi, emva koko iyazibonakalisa ngokwasemzimbeni; ke, ayimangalisi into yokuba intloko ebuhlungu okanye iintlungu zomqolo, ukungaginyisi mathe okanye ukudinwa okungafanelekanga kunxulumene noko siziva.
Ukudityaniswa kwamanye amakhadi
Ngaphezulu kubonisiwe ukuba ukuba le leta inikwe abanye, ukutolikwa kungahluka ngokwala magama; ke, apha siza kushiya ividiyo malunga naye Ukudityaniswa kweekomityi ze-ace namanye amakhadi.